Muuri News Network » Isbaarooyin badan oo la soo dhigay Gobolka Shabeellaha hoose
Isbaarooyin badan oo la soo dhigay Gobolka Shabeellaha hoose
Isbaarooyin hor leh ayaa la soo sheegayaa in la soo dhigay Deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose, halkaasi oo la soo warinayo inay soo dhigteen ciidamada Dowladda, gaar ahaan ciidamada Militeriga.
Deegaanka Mareerey, ayaa la soo sheegayaa in la soo dhigay Isbaarooyin badan oo gaaraya 11 Isbaaro, sida uu sheegay Guddoomiyaha Deegaankaasi oo ka qaylo dhaamiyay Isbaarooyinkan tirada badan ee la soo dhigay deegaankaasi.
Guddoomiyaha deegaanka Mareerey Sayid Baalle Mayow oo banaanka ka jooga deegaankaasi ayaa u sheegay Warbaahinta in Isbaarooyinkaan ay yihiin kuwo ay dhigteen rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya.
“Deegaanka Mareerey waxaa yaalla 11 isbaaro, shacabka ayaa lagu jirdilaa, dhibaato xooggan ayaa dadka meeshaan ku haysa, raggaan wax isbaaraysanaya waxay ku labisan yihiin dharkii Milatariga dowladda.” Ayuu yiri Guddoomiyaha.
Darawalada gaadiidka ayaa ka cabanaya Isbaarooyinkaan la soo dhigay oo waxa ay sheegayaan in dhaqaalo badan looga qaado wadada, taasina ay sii dheer tahay dhaca ciidamada Militeriga ay u geystaan gaadiidka shacabka ay saaran yihiin.
Maamulka Gobolka Shabeellaha hoose ayaa u caal waayay wax ka qabashada dhibaatooyinkaan ay ciidanka Militeriga ku hayaan dadka shacabka ah iyo gaadiidleeyda intuba.
Gobolka Shabeellaha hoose ayaa ah Gobolka ugu badan ee ay yaallaan isbaarooyinka dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo.